स्वास्थ्य / जीवनशैली::Nepali Online News Portal
जनै कानमा किन राखिन्छ ? जनैका के के छन् फाइदा ? जान्नुहोस्
आज यज्ञोपवित एवं जनै पूर्णिमा हो । श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन विधि पूर्वक पूजाआजा गरी पवित्र बनाईएको जनै धारण गरी यो पर्व मनाउने गरिन्छ। नेपालकै तराई भेगमा यही दिन दिदी बहिनीले दाजु भाइहरुलाई राखी बाँध्ने चलन समेत रहेको छ। द्विज जातीहरु जो जनै लगाउँछन् (ब्राह्मण, क्षत्री र वैश्य) उनीहरुको लागि यो पर्व पवित्र पर्वको रुपमा मान्ने...
क्वाँटी खाने दिन आज, परम्परामात्र होइन फाइदा पनि त्यत्तिकै
चना, मस्याङ, मुगी, बोडी, मास, भटमास, ठूलो सिमी, ठूलो केराउ, सानो केराउलगायतका गेडागुडी मिसाएर बनाएको एक प्रकारको खानेकुरालाई नै क्वाँटी भनिन्छ । क्वाँटी नेपालीहरूको भान्सामा पाक्ने झोलिलो खानेकुरा हो । हामीले क्वाँटी विशेष गरेर जनैपूर्णिमाको दिन खाने गर्छौं । यो टुसा उमारी बनाइने विशेष प्रकारको परम्परागत नेपाली परिकार हो । जनैपूर्णिमाको दिन ११ थरिका गेडागुडी क्वाँटी...
नङ फुल्दा नयाँ लुगा आउने होइन , स्वास्थ्यमा गडबडी
नङमा सेतो धर्सा बसेमा हामी त्यसलाई नङ फुलेको भन्छौँ । बच्चाबेलामा यसरी नङ फुल्दा नयाँ तथा राम्रो लुगा पाइन्छ भनेर निकै खुशी हुने गरिन्थ्यो । तर, नङ फुलेमा वा नङको रङ परिवर्तन भएमा आयुर्वे्दिक, होमियोप्याथिक, युनानी, आमची तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरूमा यसलाई स्वास्थ्यसँग जोडिएको समस्याको रुपमा लिइने गरिन्छ । नङ फुल्नु स्वास्थ्यको दृष्टिले राम्रो...
दूधसँगै कहिले नखानुहोस् यी खानेकुरा, ज्यानै जान सक्छ
दूध पिउनुका अनगिन्ति फाइदाहरु छन् । जसले शरीरमा निखारता ल्याउन निकै सहयोग पुर्याउँछ । तर दूधसँगै अरु केहि यस्ता खानेकुरा खानु विषयुक्त हुन्छ । केहि यस्ता खानेकुराहरु जुन दूधसँगै खाँदा निकै समस्या हुनसक्छ । १.तिल दूध र तिल कहिल्यै पनि सँग–सँगै खानु हुँदैन । जसका कारण तपाईलाई घाँटीसम्बन्धि बिरामी हुनसक्छ । २. करेला र नुन कहिल्यै पनि करेला...
कालाजार रोगका बिरामी भेटियो, के हो त कालाजार ?
डडेल्धुरामा कालाजार रोगका बिरामी भेटिएका छन् । जिल्लाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रका अजयमेरु गाउँपालिका- ६ का एक युवकलाई कालाजार भएको हो । साउन महिनाको सुरुवातमै अमजयमेरुका २१ वर्षीय वि।पी जोशीलाई कालाजारको संक्रमण देखा परेको डडेल्धुरा अस्पतालका प्रयोगशाला विभाग इन्र्चाज ल्याब अधिकृत इश्वरी प्रशाद भुसालले बताएका छन् । गत वर्ष डडेल्धुरालगायत सुदुरपश्चिम प्रदेशमा महामारीकै रुपमा फैलिएको स्क्रबटाईफस ज्वरो यो...
मेहन्दी लगाउनुहुन्छ? गल्ती नगर्नुहोलाः क्यान्सर सम्मको सम्भावना
धर्म संस्कृति मान्ने महिलाहरूले लगाउने मेहन्दी र चुरा पछिल्लो समय प्राय सबै जसो महिला र युवतीको लगाउने गरेका छन् । अहिले त मेहन्दी र चुरा फेसनकै रूपमा स्थापित भएको पाइन्छ । रङ्गीचङ्गी पहिरनसँगै बजारमा चुरा, मेहेन्दी र कपडाहरूको व्यापार बढेको छ । साउनको सौन्दर्य सूचक हो मेहन्दी र हरियो चुरा । खास गरी महिलाले साउन...
आज हरिशयनी एकादशी, तुलसीको महत्व र प्रयोग गर्ने तरिका
आज हरिशयनी एकादशी अर्थात ठूलो एकादशी । हिन्दू धर्ममा यस दिनलाई अति विशिष्ठ र महत्वका साथ हेर्ने र लिने गरिन्छ । आजको दिन नै घरघरमा तुलसी रोपेर आम हिन्दूहरुले चतुर्मास व्रतको आरम्भ गर्दै भगवान विष्णुको उपासना गर्ने गर्छन । भनिन्छ आजको दिनदेखि भगवान विष्णु चार महिनाका लागि क्षीर सागर सुत्न जानु हुन्छ । उहाँ...
बालबालिकाप्रति कस्तो ब्यावहार गर्ने ? अभिभावकका लागि महत्वपूर्ण टिप्स
बालबालिकाको अवस्था, स्वर, शारीरिक हाउभाउ, अनुहारको रंग बसाई आदिलाई ख्याल गर्नुस्, उनीहरु सहज र खुसी, प्रफुल्लित भएको बेलामामात्र सम्झाउने तथा निर्देशन दिने गर्नुहोस् । नराम्रो मानेका तथा असहज महसुस गरेको बेला बिषयान्तर गरेर रमाईला जोक, कथा, खेल खेल्न वा स्वतन्त्र छोड्नुस् । बालबालिकाको बुझ्ने, गर्नु सक्ने र सिक्ने क्षेमता निर्धारण गर्नुहोस्। सोही अनुसारको व्यवहार गर्नुस्।...
आज योग दिवस, के हो त योग ? योग गर्ने तरिका
आज संसारभरि लोकप्रिय भएको योग शब्द कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग अनेक रुपमा हिन्दु, बौद्ध, र जैन संस्कृतिमा व्यवहार भइरहेको शब्द हो । योगको सोझो अर्थ हो जोड्नु । योगको क्रियाले पनि मानवीय चेतनालाई यसका अनेक आयामसंग सम्बन्धित गर्न सक्छ । शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ज्ञान, त्याग, वैराग्य इत्यादि । यी सबैको केन्द्रमा गरिने सम्बन्धनलाई नै...
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पहिलो पटक कलेजोको सफल प्रत्यारोपण
फोटो – डा. रमेश सिंह भण्डारीको फेसबुकबाट त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालले पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपणमा सफलता प्राप्त गरेको छ । शुक्रबार राति शिक्षण अस्पतालमा प्राध्यापक डाक्टर रमेशसिंह भण्डारीको नेतृत्वको टिमले पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण गरेको हो । डाक्टर भण्डारीका अनुसार एक जना छोरीले बुवालाई कलेजो दान गरेकी हुन् । उनका अनुसार कलेजो प्रत्यारोपण गर्न उनको टिमलाई झण्डै...
विश्व धुम्रपान दिवस मनाइँदै, नेपालमा प्रत्येक दिन ७४ जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक
विश्व धुम्रपान तथा सुर्ती रहित दिवस आज नेपालमा पनि मनाइँदैछ । धम्रपानका कारण हुने क्षति न्यूनीकरण र सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यले विश्व स्वास्थ्य संगठनको अह्वानमा मे ३१ तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । ‘सुर्तिजन्य पदार्थ होइन, स्वास्थ्य रोजौं’ भन्ने मूल नाराका साथ विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनााइँदै छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको...
बोडेमा सयभन्दा बढीले रक्तदान गरे, कसरी बन्छ त रगत ?
भक्तपुरको बोडेमा बृहत रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । स्वर्गिय श्री रामकृष्ण घो को स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रमको बोडेबासीले आयोजना गरेका हुन् । नर्थ प्वाईन्ट मलमा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रम शुक्रबार र शनिबार गरि दुई दिन चलेको स्थानीय समाजसेवी संजय था.श्रेष्ठले बताए । दुई दिनमा १ सय २५ भन्दा बढी बोडेबासीले रगत दिएका थिए । कसरी...
भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद बैठकः कसरी गरिन्छ बैठक ? हेर्नुहोस्
नेपालमा पहिलोपटक भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको छ । सिंगापुरमा...
भरतपुर तनावग्रस्तः ठाउँठाउँमा र्‍याली र झडप, ट्रकमा तोडफोड
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला अदालत र प्रहरी कार्यालय वरपरका...
नेकपा सचिवालय बैठक सकियो, असन्तुष्टि व्यक्त गर्न नपाइने
पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को...
बाबुराम भट्टराई र भीम रावलको ट्वीटरमा टकराव
नेकपाका नेता भीम रावलले कैलालीको टीकापुरमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा...
सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र युवराज कँडेलको बयान सकियो, थुनछेकको बहस सुरु हुँदै
अहिले शालिकराम आत्महत्या प्रकरणका अभियुक्तहरु सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र...